Tuesday January 26, 2021 - 07:00:42 in Wararka by Mogadishu Times
By. Cali Muxiyaddiin Cali
Kooxo ganacsato ah iyo dulaaleey ah ayaa Xamar kaga dhawaaqday Dowlad iyaga kaliya ka kooban. Kooxdaan Sheegatay inay xukunka la wareegeen ayaa ku dooday inay arrintaas u sameeyeen oo kaliya, ay tahay, "qarashkii kaga baxay kacdoonkii dadweynaha inay ku beddesheenawoodihii qaranka”.
Laakin koox kale ee isla USC ah ayaa arrintaas ku gacan seertay. Waxaa bilaabmay dagaal hor leh, si weynna loogu hoobtay, burbur iyo kala qax aan horay loo arag ayaa lala kulmay. Dhanka kalena, Gobaladii Waqooye (Jabhaddii SNM) ayaa iyagana, iyagoo isu arkaaya inaan lala tashan,waxay ka caroodeen wixii Xamar ka dhacay.Maajo 18, 1991 ayay ku dhawaaqeen inay ka go’een, kana baxeen midowgiiSomalia, waxay ku dhawaaqeen waxalagu magacaabay Jamhuuriyadda gooni isu taagga ah ee SoomaliLand.Siddeed Sanno ka dibna,SSDF oo beri hore Siyaad Barre Qabri dhigay ayaa iyagoo reer aaqiraad ah ka hinaasaySoomaalileyntii wixii ay sameeyeen. Waxay iyagana Garowe ka sameeyay maamul beeleed xag jir ah oo la magac baxay Puntland.
Dalka ilaa hadda wuxuu ka dambeeyaa inuu ka jiro hardan qabiileed siyaasadeysan oo si fool xun u wiiqay karaamadii Madaxbannaanida iyo Midnimadii Qaranka , Firqooyin diini ah iyo Argagixiso xag jir ah oo aad u naxariis darran, Nidaamka awood beel wax ku qaybsiga ee 4.5, Dastuur qabyo qoraal ah oo la dagay masiirkii iyo himilooyinkii ummadeed iyo maamulo xag jir qabiileed, qaarkoodna isu mahadiyay inayba ka awood weyn yihiin midda dowladda Dhexe oo adduunku u aqoonsan yahay inay tahay dowlad kaliya ee sharciga ah, matashaana dhammaan Shacbiga Soomaaliyeed,lehna xuquuq aasaasi ah iyo qiyam la siman midda duwalka adduunka.
Ilaa hadda muddo rubuc qarni ku siman, redistii heeryadii kalagii talisnimada kadib, ma muuqdaan natiijooyin wax ku ool ah, unaadeegaaya in la helo nidaam dowladeed dhammeys tira ah. Waxaa kala dhantaalan siyaasadihii dowladda iyo danihii amaankii Qaranka oo ay ku hor gudban tahay ixtikaar baaxad leh oo ay sameyesteen shisheeyaha danaha kala duwan dalka ka leh, gaar ahaan kuwa dariska ah oo faragelin qaawan ee joogta ah la soo taagan.
AFEEF:Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Caasimada Online. Caasimada Online, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaadacaasimada@live.comMahadsanid